Doorashada Axsaabeed ee Puntland iyo dadaalka looga fadhiyo guddiga hirgelinta doorasho nidaam xisbiyo badan ku salaysan (dhegayso) – Radio Daljir
Seteembar 9, 2019 5:52 b 0
Puntland oo la unkay muddo haatan 20 sano ka badan laga joogo, Axadii lagu dhidbay oo KMG ahaa wuxuu dhigayey muddo saddex sano kadib ah in loo tallaabo doorasho qof iyo codkiis ah, Axadigaasi lagu asaasay Puntland isla muddadaasi saddexda sano ah oo u gudbo dastuur loo codeeyey.
Taasi ma dhicin, 20 sano kadibna Puntland doorashadeedu waxay ahayd mid Barlamaan oo shacabka reer Puntland codkooda ay ku matalaan 66 mudane oo nidaam qabiil ku dhisan iyo wax qaybsi reereed.
Ka fadhiididda Puntland ee nidaam doorasho oo axsaab ku salaysan ma ahan mid cuddadaar muuqda leh, man ahan mid loo taag iyo tabar waayey ee badanka waxaa loo sababeeyaa dadaal xumi iyo danayn lahaan hadba madaxda hoggaanka qabata dhankooda ka timaadda.
Hadda dhawaan waxaa la magacaabay guddi doorasho oo ah kuwii nidaam axsaab badan, waana markii saddexaad oo guddi noocaasi ah la magacaabo, inkasta oo la tilmaamaya guddiga hadda in ay ka wakhti haysasho roonyihiin kuwii ka horreeyey.
Haddaba dadaalka looga fadhiyo guddigaan iyo damac filasho ee doorasho qof iyo codkiis ah oo Puntland ka dhacda suuragalnimadeeda waxaan ka wareystay Siyaasi Cismaan Yuusuf Xaraare oo horay u soo noqday mudane Baarlamaanka dawladda dhexe ee federaalka ah.
Waxaana marka hore waydiiyey hawsha u taalla guddigaan ee qabashadeeda looga fadhiyo.
RW khayre oo lacag ugu Deeqay Garoonka Cayaaraha Baydhabo (Daawo)